Umtsalane wegolide: iimpahla, ukunakekelwa, iingcebiso
Ngamanye amaxesha ukusetyenziswa kwamayeza akunalo naluphi na umphumo onobuncedo nokuphucula impilo emzimbeni womntu. Kule nkalo, sibhekene nokukhangela iindlela ezintsha zempilo kwaye kaninzi sifika kwizilwanyana zamadoda. Omnye wabo ngumvavu wegolide. Esi sityalo esingapheliyo, esinokufikelela kwi-2 mitha ukuphakama. Amahlumela asetshanini ahlala ende, kwaye amaqabunga ahlaza okomnyama, oblong-lanceolate. Iintyatyambo ezintle zeemadevu zegolide zinevumba elincomekayo le-hyacinth. Namhlanje siza kuthetha ngeemigodla zegolide, iipropati, ukunakekelwa, iingcebiso ezicebisi zesi sityalo.
Imifuno yamagolide imbizwa ngeendlela ezahlukeneyo: i-calligraphy enomfutho, i-ginseng eyenziwe ngamakhaya, iinwele ze-venene, ingqolowa okanye i-East Eastern masade. Esi sityalo sichithwa lula ngokucoca. Umtsalane wegolide uyisityalo esinomthunzi kakhulu, kodwa kufuneka sibekwe ekukhanyeni ukuze kwenzeke. Ukunyamekela i-calligraphy ecocekileyo yinto elula, isityalo esiyinhloko kufuneka sinyulwe kwaye sondliwe ngamanzi omgquba okanye umquba wokucoca. Igalelo kufuneka ibe yi-moderation, kodwa awukwazi ukuvumela umhlaba uphile. Kubaluleke kakhulu ukuba ungagqithisi isityalo ebusika.
Ukukhulisa amadevu egolide udinga amandla amakhulu. Ngalo mjelo ubeka i-eggshell encinane, isanti yomlambo, ngokuba i-mustache yegolide idinga i-silicon.
Ukuzaliswa kweemadevu zegolide akukuthathi ixesha elide: i-whisk yeqabunga okanye phezulu kwentloko emanzini kwiveki ngaphambi kokuvela kwe-rootlets. Emva koko ihlumela elincinane lingatyalwa emhlabathini.
Isiqu se-calligraphy kufuneka sihlangane nenkxaso enamandla, kuba isityalo singaphula phantsi kwefuthe lobunzima bayo.
Ngokuqhelekileyo abantu baphosakele, becinga ukuba i-mustache yegolide iba yonyango kunye neyonyango kuphela xa kukho amalunga angama-12 kwi-masade. Abanye bacinga ukuba kukho ubuncinane ubuncinane obunobumba obomvu-obomvu kwiindawo ze-lianopod. Enyanisweni, amadevu egolide aqukethe izakhiwo zokuphilisa ngokwaneleyo kungakhathaliseki inani lamalungu.
I-tincture kwioli okanye utywala ngokuqhelekileyo kwenziwa rhoqo ekwindla, kuba kwi-calligraphy inani elaneleyo lezonyango liqokelela ngeli xesha lonyaka. Kubaluleke kakhulu ngaphambi kokuba ungasebenzisi ukubeka i-mustache yegolide kwimfrijini, njengoko zonke izinto zonyango phantsi kwefuthe lokushisa kubanda zingachithwa.
Amaqiniso anomdla kunye namacebiso ancedo.
Abaphandi baseMerika nabaseCanada bafumene ngekhulu lama-20 ukuba ijusi yegolide kufuneka iqulethe inani elikhulu lezinto eziphilayo ezinokuthintela kwaye zivimbele ukuphuhliswa kweeseli zomhlaza. Iingcali ziye zafumanisa ukuba iphunga elimnandi linezibonelelo eziyimpumelelo kwimpilo kunye nemiphumo emibi. Yingakho esi sityalo kufuneka sisetyenziswe ngokuqapha.
Kwijusi yeemadevu zegolide, isinyithi, ubhedu kunye ne-chromium zithe zafunyanwa, eziyimfuneko ebomini bomntu. Iiphilisi ze-calligraphy zisekelwe kwi-flavonoids-iqela leemveliso eziphilayo. Le nkunkuma inciphisa ukuhlukana kwemithambo yegazi, ifake unyango lwezilonda. Kwakhona, i-flavonoids iphilisa amanxeba, ukutshisa kunye nemivimbo, inefuthe lokunyanga kwiimathumba.
Impembelelo enkulu yokwelapha isadevu yegolide kwi-pancreatitis engapheliyo. Isityalo siphumelela kakuhle intlungu, sithintela i-microflora ezincinci, susa izinto eziyingozi emzimbeni. Kuyaziwa ukuba izigulane ezinesifo sikashukela zihlala zisetyenziswa. Kuba unyango kunye nokuthintela kwezi zifo zisebenzisa i-decoction yamagqabi endalavu yegolide, ifakwe kwishushu lokushisa.
Umlomo wamakhofu omninzi usetyenziswa ukuphatha izifo kuphela zesigxina, kodwa nakwi-asthma ye-bronchial. Izityalo ze-acupunctureist zigxininisa kwi-vodka kwaye zithatha isipuni ngaphambi kokutya. Kodwa apha kuyimfuneko ukukhankanya iziphumo zecala lokubambisana: izazinzulu ziye zafumanisa ukuba xa usebenzisa isityalo ngaphakathi, iintambo zomlomo zingonakaliswa, kwaye kuya kuba nzima ukubuyisela ilizwi. Ukongezelela, amadevu egolide angabangela ukubola.
I-calligraphy inefuthe lokuphulukisa. Esi sityalo sisoloko sisetyenziselwa ukulahla izifo zesikhumba: izilonda, izilwanyana kunye nezibilini. Ijusi yamacembe anceda unyango lwamalungu, kunye nombono unokuphuculiswa ngokugaya ijusi emehlweni.
Iyeza lemveli liphantse lingenamandla phambi kokutywala utywala. Iipilisi zamasiko ziye zaphilisa izigulane ngokuxhomekeka kotywala ngoncedo lweemadevu zegolide. Ukulungiselelwa kwesi sityalo kusetyenziswe ukuphuma ngaphandle kokusela. Into ebalulekileyo kukuba isigulane ngokwakhe sifuna ukuphiliswa.
Inqama yegolide ingasetyenziselwa phantse zonke izifo, umzekelo, ukuxinezeleka, isifo se-hepatitis, isisu, isisu, i-pitny, i-eczema, isifo sesifo sofuba, intloko yesifo, i-baldness njalonjalo. Into ephambili kukukhumbula ukuba isityalo sinokuba nesiphumo esihle kunye nesiphumo esibi. Ngoko ke, kufuneka isetyenziswe ngokulumkisa okukhulu kunye nokuthengiswa kwemilinganiselo. Umntu ngamnye unomzimba wakhe. Ngeengxaki ezincinci kukulungele ukubuyela kumayeza emveli.
Isisu esihle: amanyathelo amahlanu ukuya empumelelweni
3 iindlela ezifanelekileyo zokulwa nokunyaniseka: kusebenza ngokwenene!
Ukuqeqeshwa kwasekuseni - isibambiso sokugqwesa
I-Office yokungasebenzi: izibangela, iziphumo, iindlela zokulwa
Ngaba ubunzima obunzima bunokuchaphazela ukukhulelwa kunye nokuvuthwa?
Ukupheka okulula ukuqinisa umzimba
Unyango lwe-ozone, unyango lwe-ozone
Tart nge-cherry utamatisi
Kutheni sifuna abathandi?
Abazali baphendula ngelizwi ekugqibeleni kwi-kindergarten-kwingoma-ukuvuselela ingoma, iindinyana kunye neprose
Iintlobo kunye neqhinga lokutya okuphantsi kweekhalori
Indlela yokuchaza imigaqo yokuphepha yomlilo
Kuthekani ukuba ulwalamadoda amabini?
Indlela yokulungisa ikamelo labantwana kwinkwenkwe?
Ukutya ngezwi elifanelekileyo kubadlali
Ulonwabo lwesilisa kunye nemihlali encinane
Ukuthengwa e-Italy - ukugcina nokuzonwabisa
Izikhonkwane kunye nesinamoni
U-Olga Orlova ucebise ukuthumela unyana oneminyaka engama-16 ukuya ku- "Dom-2"
I-lavash roll kunye nealmum